Ciidamada dowladda Soomaaliya oo dilay labo dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan oo madaafiic ka dhex ridayay gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada dowladda Soomaaliya oo dilay labo dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan oo madaafiic ka dhex ridayay gudaha Muqdisho
April 16, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Gaari qarax oo ay wateen ayaa sidoo kale qarxay inta uu howlgalku socday. [Xigashada Sawirka: Sonna]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah dilay labo dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan kuwaasoo madaafiic ka dhex ridayay caasimada Muqdisho, sida uu sheegay masuul dowladda ah.
Wasiirka Amniga Qaranka ee dowladda Soomaaliya, Maxamed Abuukar Isloow ayaa wariyeyaasha u sheegay in ciidamada dowladdu ay dileen labo nin oo hubaysnaa oo Al-Shabaab ah kuwaasoo madaafiic ka dhex ridayay gudaha Muqdisho.
Gaari qarax oo ay wateen ayaa sidoo kale qarxay inta uu howlgalku socday, sida uu sheegay wasiirku.
Dhacdadaan ayaa imaanaysa kadib weeraro Al-Shabaab oo taxane ah oo ka dhacay gudaha caasimada intii lagu guda jiray asbuucyadii lasoo dhaafay.
Asbuucii lasoo dhaafay, ugu yaraan lix askari oo katirsan dowladda Soomaaliya ayaa geeriyooday kadib markii qof Al-Shabaab ah oo isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay xero milatari oo kutaala duleedka Muqdisho.
January 3, 2017 Ciidamada booliiska gobolka Banaadir oo Muqdisho ku xiray niman looga shaki qabo Al-Shabaab
Galkayo-(Puntland Mirror) Around eight people have been killed in Galkayo town in fighting between Puntland and Galmudug, residents and medical officials said on Friday. A dozen others were wounded in the fighting, according to the [...]